Sheekh Dirir Oo Shaaciyey Mowqifkiisa Ku Aadan Go’aanka Ay Somaliland Ku Xidhayso Masaajidada - Jigjiga Online
HomeDiintaSheekh Dirir Oo Shaaciyey Mowqifkiisa Ku Aadan Go’aanka Ay Somaliland Ku Xidhayso Masaajidada
Sheekh Dirir Oo Shaaciyey Mowqifkiisa Ku Aadan Go’aanka Ay Somaliland Ku Xidhayso Masaajidada
Hargeysa (JO_ – Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir, oo kamid ah culimada ugu waaweyn ee Somaliland, ayaa si adag uga hor-yimid go’aanka ay xukuumaddu ku xidhayso Masaajidda oo Guddida COVID-19 ay amartay in aan salaadaha lagu tukanin muddada uu jiro xanuunka Coronavirus.
Sheekh Maxamed Dirir ayaa ka dhawaajiyey in xiligan aanay jirin khatar weyn oo sababi karta in la xidho Masaajidda ku yaala Somaliland, xili ay weli furan yihiin Meelaha lagu qayilo, isla markaaana uu si toos ah u soo galo Qaadku.
Somaliland ayaa shalay sheegtay in aanay awood ciidan u laheyn joojinta Qaadka, midaasi oo la yaab ku noqotay dad badan, maadama ay Somaliland ku doodo inay tahay dal madax-banaan oo awood u leh maamulida xuduudaheeda.
Sheekh Dirir ayaa ku taliyay in Xukuumada Muuse Biixi ay go’aankeeda ka dhigto arrin ikhtiyaari ah oo qofkii awooda uu tagi karo Masaajidda, halka ka kalena uu ku tukan karo gurigiisa.
“Tafsiir kalena wuu barbar socdaa oo dadku waxay aad noogu celcelinayaan laba meelood oo aad looga baqayo in bahalkaasi aad inooga soo galo labadiiba waa laga yara gabaday oo waa diyaaradda iyo qaadka, dayuuradiina dadbay keenaysaa, qaadkii oo juudaan, iyo baras iyo virus iyo waaliba sita isaguna wuu marayaa, dawladuna waxay tidhi kaas ma taataaban karayno” ayuu yiri Sheekh Maxamed Dirir.
Wuxuuna intaas kusii daray “Jamacayaga ha taataabanin ayay dadku leeyihiin, anaga waxa qaadka nooga xaasaasisan jamaca, markaas haddii la leeyahay qaadku waa xaasaasi jamacuna waa xaasaasi ayay dadku leeyihin. Masjidkuna ma sahlana arrintiisu, taariikhda islaamka marka dib loogu noqdo mararka qaar waxa dhacayay cuduro aad u khatar badan oo shan kun ilaa toban kun dhimanaysay maalintii”.
“Weligeed may dhicin in masaajid loo xidho ama xajka iyo cumarada la xidho, taariikhdu waxay leedahay buugaag lagu qoro, dadku way dhiman jireen waanay soo cumraysan jireen soona xaji jireen. Markaas inagoo ku mahadinayna guddiga iyo xukuumadda dedaalada waxay ku soo ururaysaa, Alle khatar inaguma keenee hadday khatar ka baqano iyo cudurkaasi inuu halkan ka faafi karo daniba way xidhi doontaa laakiin inta ka horaysa ikhtiyaar ha ahaado. Culimada 98% iyo dadweynaha arrinta ikhtiyaari halaga dhigo oo yaan qasab laga dhigin ayay qabaan oo qofkii doonaana gurigiisa haku tukado kii doonaan masaajidka”.
Xukuumada Somaliland ayaa dhowaan soo saartay go’aan ay ku joojinayso in Masaajidda lagu tukado Salaadaha, xili ay weli deegaanadeeda uu soo galo Qaadka, oo ka yimaada dalka Itoobiya oo la daala dhacaya cudurka halista ah ee Coronavirus, iyada oo Madaarka Hargeysa ay ka soo dagto diyaarada Ethiopian Airlines oo dad kasoo qaada wadamo uu ka jiro cudurkaasi.
Somaliland ayaa guud ahaan deegaanadeeda laga helay 5-kiis oo la xiriira cudurka Coronavirus, iyada oo laga cabsi qabo in tiro intaasi ka badan uu haleelo cudurkaasi, maadama aysan weli xukuumadu soo saarin go’aano si dhab ah uga hortagaya faafida cudurkaasi.
Somaliland Oo Cusbitaal Gaar Ah U Samaynaysa Bukaannada Xanuunka #COVID19
Dowladda Soomaaliya oo xaqiijisay inay bukaanno Kale u geeriyoodeen